10 Zvimiro Zvinoshaikwa Kubva muBlog Yako | Martech Zone
Chipiri, July 21, 2009 China, April 28, 2016 Douglas Karr
Zvimwe zve mhinduro yandakagamuchira kubva kune vaverengi ndeyekuti ini ndanga ndisiri kupa yakawanda mhinduro nezve kublogi pa Martech Zone. Saka - nhasi ndafunga kuti ndingatora imwe nzira uye ndotarisa tekinoroji yakatenderedza chirongwa chako cheblogging kuti upe vaverengi runyorwa rwezvinhu zvekutarisa uye kuona kuti yavo blog ine.
Robots.txt - Kana iwe ukaenda kumudzi (base kero) yedomain yako, wedzera Robots.txt kukero. Muenzaniso: https://martech.zone/robots.txt - pane faira ipapo? Faira ye robots.txt idhiyo faira yemvumo iyo inotaurira injini yekutsvaga / dandemutande / chinokambaira kuti ndeapi madhairekitori ekuregeredza uye ndeapi madhairekitori ekukambaira. Uye zvakare, iwe unogona kuwedzera chinongedzo kune yako sitemap mairi! Hauna imwe? Vhura notepadhi kana pepa remanyorerwo uye uzviitire wega… ingo tevera rairo dziri pairi Robotstxt.org
Sitemap.xml - Simba rakagadzirwa sitemap chinhu chakakosha chinopa injini dzekutsvaga ne mepu yezviri mukati mako zvirimo, zvakakosha sei, uye kuti zvakazopedzisira kuchinjwa riini. Pari kure rakanakisa sitemap jenareta yandakamboshandisa iri Arne Brachhold's XML Sitemap jenareta. Iyo zvakare inoendesa iyo sitemap kune Live / Bing, Yahoo!, Google uye Bvunza! (kana Bvunza kutumira basa kuri kushanda).
Yemagariro Media Flair - Ndine rondedzero yakazara yemasaiti iwe aunogona kundiwana ndichibatanidzwa munhau dzezvemagariro. Rangarira - yako blog haina kugara iri kuenda kune mumwe munhu! Dzimwe nguva kushamwaridzana mumasocial media saiti uye kushamwaridzana nevaya vane zvakafanana zvido kunogona kubatsira kusimudzira yako blog kune akakodzera vateereri ... kure bhurogu yako. Mune yepamusoro kurudyi padivi, iwe unowana anoverengeka masosi kwaunogona kundiwana ini! Ive neshuwa yekuwedzera ini seshamwari, ini ndinodzorera nyasha.
Mobile Kuenderana - Nhare yeInternet kushandiswa kuri kukura! Yako blog inoverengwa pane mbozhanhare skrini? YeWordPress, pane akakodzera WordPress Mobile Plugin iyo inoita iyo saiti yakagadzirirwa mobile uye kunyangwe iPhone Safari kushandiswa.
tsananguro - Kana ndikamhara pane rimwe remapeji ako ega eblog rako, ndaizoziva here kuti raive nezvei? Dzimwe nguva zvinonetsa kuti utaure nokungoverenga chinyorwa. Kuve nerondedzero yakanaka mubara rako rezasi rerudzii rwezvinyorwa zvaunopa zvinogona kuve zvakakosha kuti vaverengi vanyore kana kudzoka.
Contact Form - Ndiri kushamiswa nenhamba yemablog ayo asina nzira kunze kwenzvimbo yekutaura kuti ubate blogger! Une chinongedzo chekufambisa chinonongedzera kuFomu Rekubata? Mafomu ekutaurirana haanyanyo kuvhiringidza kupfuura nhamba yefoni uye haakuise panjodzi sekusiya email kero kumusoro.
About Peji - Ndiwe ani uye nei ndichifanira kuvimba newe? Kunyangwe zvikanzwika kusetsa kunyora peji rinotaura nezvako zvawakaita… hazvisi zvako, ndezvevaenzi. Vape nongedzo yekuti nei vachifanira kunge vachiteerera iwe.
Chiratidzo - Nekuuya kwemabhurawuza ane mabheji, zviri nyore kwazvo kusiyanisa blog yako nekuwedzera chiratidzo. Kana iwe usingazive sei, ingo shandisa Favicon jenareta kugadzira iyo ico (icon) faira uye kurodha pasi kune iro dhairekitori rewebhu webhusaiti yako. Mamwe mafaera emifananidzo anogona kushandiswa futi, kana mifananidzo kana maicon akabatwa kumwe kunhu - ingo gadziridza iyo nzira yekudimbudzira icon mumusoro wako.
Disclaimer - Ehe, iwe unogona kumhan'arirwa kune izvo iwe zvaunoburitsa pane yako blog. Zvidzivirire iwe neako pfuma nekuona kuti une chakakura Disclaimer!
Yemagariro Midhiya Kubatanidzwa - Tumira kuburikidza Twitter ne Hootsuite, LinkedIn, Email Subscriptions, Facebook uye kubatanidza chishandiso chine simba, shandisa Syndication kune kugona kukuru!
Tags: nezve pejitsananguro yeblogkuonana chimiroDisclaimerkuvakemobile kuonaRobots.txtSITEMAPmabhatani emagarirokubatana kwenhau
Ivo Amai veZvose Databases
Jul 22, 2009 pa 3: 58 AM
Kutenda kune iyi link uye irwo runyorwa rukuru rwemazano. Iwe une yakakosha poindi nezve rondedzero uye chishamiso. kuenda kuzowedzera mublog rangu futi 🙂.
Jul 22, 2009 na5: 13 PM
Urwu runyorwa rwakanaka. Ndine chinyorwa chinotyisa pakubika pachinhu chimwe chete, ini ndichamonora akati wandei mukati uyezve ndonongedzera kumashure kuchikwereti zvechokwadi.
Jul 22, 2009 na11: 32 PM
Ini munguva pfupi yapfuura ndakarondedzera nezvekuti zvakaoma sei kuwana ruzivo rwekubatana pamablog uye handina kukwanisa kubvumirana newe zvimwe. Chii chikuru? Zvino - oops - ini ndakaona kuti ndakanga ndisina nzira yakapusa ndokuiwedzera.
Jul 23, 2009 na2: 29 PM
Mazhinji emazano akanaka pano, uye yakanaka 'yekutarisa' kune blogger. Ndatenda!
Jul 14, 2011 pa 6: 58 AM
Mazano akanaka Douglas, ndinofunga iwe unofanirwa kuwedzera zvinotevera mu robots.txt yako futi
# Internet Archiver Wayback Mashini
# digg girazi
Tarisa rako rekushandisa log uye Usabvumire madandemutande aya nekuti anoba bandwidth yako uye anoita kuti yako saiti isawanikwe kune vashanyi kwenguva pfupi.